Waa Kuwee TODOBADA Shaqsi Ee Barcelona Ka Tirsan Ee Doonaya In Antoine Griezmann Uu Camp Nou Yimaado? - Gool24.Net
Waa Kuwee TODOBADA Shaqsi Ee Barcelona Ka Tirsan Ee Doonaya In Antoine Griezmann Uu Camp Nou Yimaado?
Waxaa soo baxay war sheegayay in qolka labiska Barcelona aan laga doonayn saxiixa Antoine Griezmann.
Sanad ka hor ciyaartoyda kooxda Barcelona ayaa farxad ka muujinayay in uu Antoine Griezmann ku soo biiro kooxdooda laakiin go’aankii uu badalay ayaa wax badan badalay.
Laakiin wali waxaa jira todoba qof oo Barcelona ka tirsan oo la ogaaday in ay doonayaan sidii uu Antoine Grizmann Camp Nou u iman lahaa.
Griezmann ayaa si rasmi ah u macasalaameeyay jamaahiirta kooxdiisa Atletico Madrid kuwaas oo qayb ka mid ahi ay ku oriyeen kulankii ugu danbeeyay ee shalay.
Haddaba waayo todobada qof ee doonaya in Griezmann uu Barcelona ku soo biiro?
Wargayska Mundo Deportivo oo magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa faah faahin ka bixiyay todobada shaqsi ee wali doonaya in Griezmann uu kooxda ku soo biiro.
Mundo Deportivo ayaa shaaciyay in agaasimaha Barcelona ee Pep Segura iyo waliba agaasimaha ciyaaraha ee Eric Abidal ay doonayaan in Griezmann uu kooxda yimaado waxaana go’aankan ku taageersan caawiyaah Abidal ee Ramon Planes.
Waxaa warkan lagu sheegay in Pep Segura iyo Eric Abidal ay aaminsan yihiin in lacagta 104 milyan gini ah ee lagu iibsan karo Griezmann ay tahay mid hal kasta oo gini ay u qalanto in lagu helo adeega xidig Grizmann oo kale ah.
Mundo Deportivo ayaa sidoo kale sheegay in Samuel Umtiti iyo Ousmane Dembele ay iyaguna doonayaan in xidiga xulkooda France ee Griezmann uu kula soo biiro Camp Nou iyaga oo waliba si gaar ah u soo dhawayn kara.
Shantan shaqsi ee aan soo sheegnay oo kaliyi Griezmann kama doonayaan Camp Nou balse Gerard Pique oo ahaa xidigii Barcelona ka tirsan ee haddana Griezmann kala qayb galay dhukumenterigii go’aan qaadasho ee uu sanadkii hore Atletico Madrid ugu sii joogay ayaa qayb ka ah.
Gerard Pique ayaa eedayn badan kula kulmay in uu ka soo muuqday filimkii Griezmann laakiin waxa uu doonaya in xidiga reer France uu Barcelona ku soo biiro.
Tababare Ernesto Valverde ayaa ah shaqsida todobaad ee lagu sheegay warbixintan in uu doonayo sidii uu Griezmann uga soo degi lahaa Camp Nou.
Markii Valverde la waydiiyay booska uu Griezmann kaga haboobaankaro kooxdiisa ayuu yidhi: “Haddii uu dhamaadka yimaado Barcelona , waxaanu eegi doonaa (halka uu ku haboon yahay)”.
Wuxuuna Valderde doonayaa in xidiga reer France uu qayb ka noqdo kooxdiisa xili ciyaareedka soo socda si uu ugu dagaalami karo saddexda koob.
Laakiin waxaa jira warar is khilaafsan oo ka soo baxaya dhinaca uu Lionel Messi la jiro iyada oo wararka qaar sheegayaan in Messi uu ka soo horjeedo in Griezmann uu Barcelona yimaado.
Laakiin warar kale ayaa sheegaya in Griezmann uu sheegay in aanu maya ku odhan karin Messi taas oo laga fahmay in Lionel Messi uu doonayo in Griezmann uu yimaado Barcelona.